मलाई सबै केटा मन पर्छ तर विप्लवको छोरा साह्रै मन पर्छ !(भिडियोसहित) – Khabar 27 Media
मलाई सबै केटा मन पर्छ तर विप्लवको छोरा साह्रै मन पर्छ !(भिडियोसहित)
March 29, 2021 March 29, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on मलाई सबै केटा मन पर्छ तर विप्लवको छोरा साह्रै मन पर्छ !(भिडियोसहित)
गायिका ज्योति मगर समय–समयमा चर्चामा आइरहन्छिन् । स्टेज प्रस्तुति, कपडा पहिराई, विभिन्न पकृतिका अभिव्यक्तिलगायतका कारण उनी चर्चामा आइरहन्छिन् । उनको नीजि जीवनबारे जान्ने इच्छा धेरैलाई हुनसक्छ । जान्ने इच्छा हुनुपनि अस्वभाविक होइन । किनकी ज्योति एक ‘चर्चित’ गायिका हुन् । उनका हजारौं समर्थक छन् ।
लोकगायिकाको रुपमा चर्चित उनी म्युजिक भिडियो अभिनय तथा स्टेज पर्फमेन्समा बोल्ड अवतारको कारण पनि चर्चामा हुन्थिन् । त्यसैले त ‘डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल’ उनी आफ्नो छवि परिवर्तन गर्न मात्र शोमा उनी सहभागी भएको आरोप पनि लाग्यो । उनी भने आफुमा रहेको बहुमुखी प्रतिभा प्रस्तुत गर्न शोमा सहभागी भएको बताउँछिन् ।
यसैबीच, ज्योतिको विवाह भएको होला नहोला ? उनले यो प्रश्नको सामना कयौं ठाउँमा गरेकी छन् । उत्तर भने स्पष्ट रुपमा दिएको सुनिदैंन । आज भने उनले सबैलाई प्रष्टरुपमा यसको जवाफ दिएकी छन् । ज्योतिले आफ्नो विवाह नभएको बताएकी हुन् । बाँकी हेर्नुस् तलको भिडियोमा-
June 11, 2021 Shyam Lama
June 15, 2021 October 4, 2021 Shyam Lama